LaunchPad Online | SeePwar
အောင်မြင်တဲ့ Startup တစ်ခုကို တည်ဆောက်မယ်​
Zaw Gyi ျဖင့္ဖတ္ရန္
“ စိတ်ကူး အိမ်မက်ထဲက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေမများပဲ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ပထမဦးဆုံးခြေလမ်းကို စတင်နိုင်ဖို့ Launch Pad Online အစီအစဉ်က ကူညီပေး သွားမှာပါ။”
စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်း အတတ်ပညာကို ဘ၀ တသက်စာ ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးကို အလုပ်မပျက် ကျောင်းမပျက်ပဲ သင်ကြားခွင့်ရမယ့် အခု Launch Pad Online လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
စားသုံးသူတို့ ထံက အကြံဉာဏ်ရယူတာ၊ လုပ်ငန်း မော်ဒယ်ရေးဆွဲတာ၊ ထုတ်ကုန်သစ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲတာနဲ့ စျေးကွက်ဝင် မဟာဗျူဟာ တွက်ချက်တာ အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ Startup တစ်ခုကို တည်ဆောက်မဲ့ လူတွေတိုင်း မဖြစ်မနေ ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးတွေပါ။ Startup တစ်ခု တည်ထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အစအဆုံး လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အခြေခံကစပြီး အနီးကပ် ကြီးကြပ် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမဲ့ LaunchPad Online အစီအစဉ်ကို မိမိသဘောကြရာ အချိန်မှာ စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
အခုသင်တန်းဟာ သင်တန်းကာလ ၃လ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်သင်ချင်တဲ့ အချိန်ကနေစပြီး သင်ယူလို့ရပါတယ်။
Plan A မှာတော့ Online မှတင်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ အကုန်လုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ စွန့်ဦးတီထွင်သူ တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လိုသူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံသိထားရမယ့် အရည်အသွေးတွေကို လေ့လာ လေ့ကျင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Plan A ကတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်သင့်လာလိုး စဉ်းစားနေသူတွေနဲ့ ပိုပြီးကိုက်ညီ ပါတယ်။
Plan C ကတော့ Plan A မှာပါဝင်တဲ့ သင်တန်းတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင် ကိုယ်အကောင်အထည် ဖော်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းကို အလျှင်အမြန် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် တစ်ဦးချင်း သီသန့် ကူညီပေးမယ့် Coaching Session တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Coaching Session တွေကိုတော့ SeePwar.com ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ CEO လဲဖြစ်၊ Founder လဲဖြစ်၊ နိုင်ငံတာ အသိအမှတ်ပြု Lean Startup Coach ဖြစ်တဲ့ အကာဖြိုး ကိုယ်တိုင်က ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လကို အချိန် (၁) နာရီကြာ Coaching Session (၂) ကြိမ်နှုန်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Plan C ကတော့ လုပ်ငန်း တစ်ခုကို တကယ်စတင်လုပ်ကိုင် တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ သူတွေနဲ့ အထူးသင့်တော် ပါတယ်။
သင်တန်း ပြီးဆုံးသွားရင် ဘာတွေလုပ်တတ် သွားမလဲ။
မိမိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ငန်း အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ထုတ်တတ်လာမယ်။
ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းက စျေးကွက်ထဲမှာ အလားအလာရှိလားမရှိဘူးလား ဆိုတာကို သုံးသပ်တတ် သွားပါမယ်။
ထုတ်ကုန်အသစ် (သို့) ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တွေကို ဘယ်လို ဘယ်ကနေ စတင်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ရမလဲ ဆိုတာကို လုပ်တတ် သွားပါမယ်။
စျေးကွက် တစ်ခု အတွင်း မဝင်ရောက်မီခင်မှာ ကိုယ်လုပ်ငန်းသစ်အတွက် လိုအပ်တာတွေကို ပြင်ဆင် တတ်သွားပါမယ်။
၃ လနေ ၆လ အတွင်းမှာ ဖောက်သည် (၁၀) ယောက် ရအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို တတ်ကျွမ်းသွားပါမယ်။
ဒီသင်တန်းက ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ သင့်လျော်သလဲ
Innovative ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်ချင်သူတွေ
အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင် မြေစမ်းခရမ်းပျိုးထား ချင်သူတွေ
Startup (ဒီဂျစ်တယ် / စက်မှု နည်းပညာ အခြေပြု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ရေရှည်မှာ လူသန်းပေါင်းများစွာကို အကျိုးရှိစေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ တည်ထောင် ချင်သူတွေ
ဆန်းသစ်တဲ့ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဆန်းသစ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို စျေးကွက်ထဲ ချပြချင်သူတွေ
လုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု Products တွေကို တာဝန်ယူထားတဲ့ Manager တွေ
I attended 1st Batch of launch pad online to start up my idea. I gotalot of knowledge and how to check and start up idea to business. Every week one hour mentoring with Ko Ahkar was valuable time. He is really generous in mentoring, every point on weakness and strength of idea path to transform business. "I strongly recommended to join launch pad online if you have passion on your idea." Don't worry if you can't do any business within the course duration , course system is easy to understand and you can guide yourself by using course method. Thank you Launch Pad Online Team!
Myat Thin Hsu
The reason to attend the course is to turn my side hustle wellness project into business. I learnt the step by step process of Startup. Those who want to properly understand how Startups work as well as how to adjust and localize should take this course. I found Ko Ahkar's approach of teaching simple, clear, on point. He's easy to talk to about your passion and brainstorm well with.
CEO, Escape To Transform
သင်ကြားလေ့ကျင့် ပေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေက
သင်တန်းသူ/သား တွေရဲ့ ဘ၀ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီပြီး အလားအလာကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကြံဉာဏ်တွေကို နည်းစနစ်တကျ ဖော်ထုတ်နည်း။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေရှိကြပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း လုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာ တွေ့ကြုံလာနိုင်တဲ့ အချက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကြံဉာဏ်တွေကို ဘယ်လို ရွေးချယ်သွားကြရမလဲ ဆိုတာကို လေ့ကျင့်ပေးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့ အကြံမရှိသေးသူတွေကို အကြံဉာဏ်တွေ စနစ်တကျ လုပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဦးမှာပါ။
အလားအလာ ကောင်းတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အကြံဉာဏ်တစ်ခုကနေ လက်တွေ့ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ အခါမှာအကျိုး အမြတ်ရှိရှိ လည်ပတ်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်း မော်ဒယ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းနည်း။
ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အကြံကောင်းတွေရှိတယ်။ တကယ် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ လူနဲ့ လက်တွေ့မလုပ်တဲ့ လူပဲကွာသွားကြတာ လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းဟာ သူတို့အကြံဉာဏ်တွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ချင်ကြတာချည်းပါ။ ဘယ်လို စလုပ်ရမှန်းမသိလို့တာ ခက်နေတာပါ။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ လုပ်ငန်းအကြံဉာဏ်တွေကနေ လုပ်ငန်းမော်ဒယ် တစ်ခုကို အသွင်ကူးတဲ့ နည်းပညာကို သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးမှာပါ။
ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းမော်ဒယ်ရဲ့ အလားအလာကို ဆန်းစစ်နည်း။
လုပ်ငန်းမော်ဒယ်တစ်ခုရဲ့ အလားအလာဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူရဲ့ စဉ်းစားတဲ့ ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အများကြီးပြောင်းလဲပါတယ်။ Facebook နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Friendster ဆိုတာလည်း လူမှုကွန်ယက်ပါပဲ။ အခုတော့ Friendster ဟာ သမိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။ လုပ်ငန်း မော်ဒယ်တစ်ခုဟာ လုပ်ငန်း တစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ မော်ဒယ်တွေရဲ့ အလားအလာကို ဆန်းစစ်တတ်အောင် လေ့ကျင့် ပေးသွားမှာပါ။
ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းမော်ဒယ်ကို အခြေပြုပြီး Customer တွေနဲ့ အတူ ထုတ်ကုန် အသစ် (သို့) ဝန်ဆောင်မှု အသစ် တွေကို ဆန်းသစ် တီထွင်နည်း။
အလားအလာ ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းမော်ဒယ် တွက်ချက်ပြီးနောက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Customer တွေနဲ့ ထိတွေ့ပြီး သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ တွေ့ရှိလာတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကနေမှ ထုတ်ကုန်တွေကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ကြရမှာပါ။ လုပ်ငန်း မော်ဒယ်တစ်ခုမှာ Customer တွေက အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တာမို့ သူတို့နဲ့ အတူ အနီးကပ်ထိတွေ့ပြီး ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဘယ်လိုစနစ်တကျ တီထွင်ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို အခုသင်ခန်းစာမှာ လေ့ကျင့်ရမှာပါ။
ကိုယ် ဆန်းသစ်တီထွင် ထားတဲ့ ထုတ်ကုန် အသစ်တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တွေကို စျေးကွက် အတွင်း ထိုးဖောက်နည်း။
စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို တတ်နိုင်သမျှ Customer များများကို ချပြချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ မဟာဗျူဟာ ကျကျ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အခုပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Customer တွေရဲ့ အားကိုယူပြီး စျေးကွက်ထဲကို ဘယ်လို ထိုးဖောက်ရမယ် ဆိုတာကို လေ့လာရမှာပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပိုချမလဲ။
Online ပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသော သင်ခန်းစာများ။
အရေးကြီးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို Online ပေါ်မှာ သင်တန်းသူ / သားတွေ ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကြည့်လို့ရအောင် စီစဉ်ထားပေးမှာပါ။ တစ်ယောက် ချင်းစီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Password နဲ့ဝင်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သင်ခန်းစာကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက်နှုန်းနဲ့ ကြည့်လို့ ရမှာပါ။ ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာ နိုင်ငံတကာမှာ ကုမ္မဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Google, Amazon နဲ့ Facebook တို့လို ကုမ္မဏီကြီးတွေ အသုံး ပြုနေတဲ့ ဆန်းသစ် တီထွင်ခြင်း နည်းနာ တွေကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားမှာပါ။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကို ၃ လစာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Online မှ တဆင့် အဖွဲ့လိုက်တွေ့ဆုံပွဲများ။
စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အခြား စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတာဟာ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ သဘာ၀ပါ။ ငွေအရင်း အနှီး ထုတ်ချေးမဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ ဖြစ်စေ၊ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လိုတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူကို ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး အကြောင်းကို ပြောဆို ဆွေးနွေးကြရပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာ လိုလာမယ့် အရည် အသွေးတွေ နဲ့ နည်းနာတွေကို လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့လည်း LaunchPad Online က စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အဖွဲ့လိုက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း အကြောင်းကို ဆွေးနွေးရင်း လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ နည်းနာတွေကို လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
Online မှ တဆင့် တစ်ဦးချင်း လူတွေ့ ဆွေးနွေးမှုများ။
လုပ်ငန်းတွေဟာ လိုအပ်ချက်တွေ တူညီလေ့မရှိပါဘူး။ လိုအပ်ချက်မတူညီတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေကို အားလုံးတန်းတူ သင်တန်း ပေးလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီသင်တန်းမှာ လူ ၃၀ ပဲလက်ခံသွားမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လုပ်ငန်း တည်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးနေသူတွေအားလုံးကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ Online ကဆင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးအောင်မြင်တဲ့ Startup တွေ အဖြစ် မြင်ချင်လို့ပါပဲ။ LaunchPad Online အစီအစဉ်မှာ Startup တွေ အကုန်လုံးကို ၂ ပါတ်ကို ၁ ကြိမ်နှုန်းနဲ့ ၃ လစာ လူတွေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးမယ့် ထူးခြားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပါဝင်ပါတယ်။
သင်တန်းကို ဘယ်လို လည်ပတ်မှာလဲ
အခု သင်တန်း Online သင်ခန်းစာတွေကို ၃ လ လိုက်လုပ်ရမှာပါ။ Online သင်ခန်းစာတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း တွေ့ပြီး အကူအညီပေးတာကို တော့ Chapter တစ်ခုပြီးသွားတိုင်းမှာလုပ်ရမှာပါ။ အဖွဲ့လိုက် တွေ့တာတွေကိုတော့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို စီစဉ်ပေးမှာပါ။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာရပ်ဝန်း အရှိန်အဟုန်မြင့် ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ဖန်တီးရာက နည်းပညာကို တီထွင်သူတွေ၊ အသုံးပြုသူတွေ ကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ Phandeeyar ဟာ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေပြု ကုမ္မဏီ (Social Entreprise) တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးရာ က လုပ်ငန်းရှင်တွေကို မွေးထုတ် ပေးတဲ့အပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို လည်းပြုလုပ်သည်။ လက်ရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော ကုမ္မဏီ ၁၁ ခုရှိပြီး ဖြစ်သည်။
စီးပွားဒေါ့ကွန်းက စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေရဲ့ ဆန်းသစ် တီထွင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိပ္ပံအခြေပြု နည်းလမ်းတွေနဲ့ အထောက်အကူပြု နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ်တွေကို အလေအလွင့် အနည်းဆုံးနည်းပုံစံ အသုံးပြုပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို စျေးကွက်အတွင်းမှာ ဖြန့်ချီနိုင်ဖို့ တတ်သိပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး အကူအညီ ပေးနေပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိရှိနိုင်ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ပါ။
ဝန်ဆောင်မှု စျေးနှုန်း တွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အချိန်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် ဆောင်းပါးတွေလည်း ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ စာရင်းပေးသွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိရနိုင်ပါတယ်။
SeePwar © 2019 All rights Reserved.